Thwebula BartVPN 1.2.2 – Vessoft
BartVPN – a software ukuqinisekisa evikelwe futhi ibethelwe internet uxhumano. Isofthiwe kwenza ukuba akhethe iseva ushintsho okwesikhashana-ikheli le-IP noma ukushintsha kukhethwa iseva ukufeza ukulahleka sakugcina speed ngesikhathi ukuphequlula internet. BartVPN ngokuzenzakalelayo usinikeza isivikelo software lakhetfwe encwadzini ohlwini jikelele ukuthi ukufinyelela ku-intanethi. Futhi BartVPN inikeza ulwazi mayelana izinqubo umsebenzi ngendlela imibala ehlukene, ngamunye okuyinto ebonisa isimo ethile internet uxhumano.
Kuvikelekile internet uxhumano
Ukukhetha Automated noma manual of a server
Ukulawula uhlu izicelo avikelwe ngokubusa software
Amazwana on BartVPN:
BartVPN Ahlobene software:
Amafayela Isofthiwe uyalulama amafayela elahlekile noma ngephutha kusulwe of izinhlobo ezahlukene. Futhi isofthiwe kwenza ukuba alulame idatha kusuka e-mail kanye ephathekayo abathwali idatha.